Otu n'ime ndị ọzọ na-ewu ewu ihe ị pụrụ ime na Mgbe mmetụta bụ ịmepụta otu animated logo maka gị, ma ọ bụ gị ahịa, azụmahịa. Ya anya ini enye okụtde, chọrọ na a oké ụzọ mmasị ahịa, ya mere, ka anyị nwere anya ihe na-aka.
Anyị ọrụ mbụ ya melite anyị oru ngo njikere maka na-aga aga, otú akpa anya na-eke a mejupụtara iji mejupụtara> New na-arụ ọrụ na ya. M na-eji otu obere web mkpebi nke 320 x 240 ọnọdụ n'ihi nzube a.
Ugbu a anyị nwere anyị kpuchie, anyị mkpa ihe na-ewu na, otú ọzọ anyị na ike a siri ike oyi akwa n'ihi na anyị na Logo site na iji n'ígwé> New> siri ike, ị na-ahọrọ kwesịrị ekwesị agba iji kwekọọ gị mejupụtara. M na-eji # 000000 nke bụ Black maka ma.
Ugbu a anyị nwere si zụlite anyị ka ike anyị logo. Ugbu a, lee i nwere ike tinye na a tupu njikere logo, artwork ma ọ bụ ihe ọ bụla na-arụ ọrụ, n'ihi mfe m nnọọ na-aga iji a dị mfe ederede ihe dị ka m logo igosipụta Usoro.
Ya mere, m ugbu a, m na-aga site Layer> New> Text na ike m ederede oyi akwa. Gbanwee ederede size na agba ya mere na ọ nwere ike hụrụ n'ụzọ doro anya na anyị na-mere.
Ugbu a anyị nwere anyị Logo, dị ka ọ bụ, anyị nwere ike ịmalite ịgbanwe ya ike na-aga aga. Ọ bụrụ na ị mkpa gị logo na-n'ụzọ zuru okè hiwere, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ihe n'eziokwu, a kemfe ndumodu bụ iji okporo iji hụ na ihe niile bụ nri ebe ị chọrọ ya, ị nwere ike ịnweta na site na iji bọtịnụ na mejupụtara panel ka e gosiri n'okpuru .
Obi dị m ụtọ ebe m na ederede bụ ka onye a, ma ọ bụ a bara uru ngwá ọrụ mara banyere n'agbanyeghị ihe ị na-eme.
3. agbakwụnye Mmetụta
N'ihi na anyị na mgbalị mbụ na-aga aga anyị na-aga na-eji mmetụta wuru n'ime Mgbe mmetụta onwe ya, nke a bụ nnọọ ihe kasị n'ụzọ kwụ ọtọ ụzọ nke na-ụfọdụ nnukwu results. N'ihi na nke a otu, anyị mata Solid Layer na usoro iheomume panel, na mgbe ahụ họrọ anyị mmetụta. Ị nwere ike ma na-aga site Mmetụta> Ịme anwansị> CC Particle World na-esi na onye anyị na-na-eji ebe a, ma ọ bụ nanị gaa mmetụta na presets panel na nri na ịdọrọ ndị CC Particle World mmetụta jidesie gị siri ike oyi akwa. Edi kûfre ị na-aga, ọgwụgwụ N'ihi bụ nke a.
The mmetụta njikwa na nri bụ nnọọ keukwu, ma na-akpọ gburugburu na ha i nwere ike ịhụ ụfọdụ na-akpali results, n'ezie, ọ na-eme na-akwụ nnwale mgbe na-agbalị a di iche iche nke ọhụrụ oru ngo dị nnọọ ịghọta ihe bụ omume. Ebe ebe anyị na-achọ na Particle World ịme anwansị mmetụta ka ihe atụ, i nwere ike na-agbalị ka ndị ọzọ na-ahụ ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na mmetụta. Ebe a ka m gbanwee Gravity ka .200 dị ka ọ na-eme ka ahụ gbaa kwupụta ihuenyo a obere ihe na m na-ahọrọ na mmetụta, na adịkwa urughuru na agba ya na ederede.
4. Ịnweta nri Order
Nzọụkwụ na-esonụ bụ ihe dị mfe otu ma uru banyere. Mgbe na-agbalị ọ bụla ụdị na-aga aga, ị ga-esi n'ime àgwà nke inwe gị n'ígwé na nri iji maka ya niile na-arụ ọrụ.
Lee, anyị kere anyị siri ike oyi akwa akpa, na ederede na-anọdụ na top. Nke a pụtara ọ bụla mmetụta na-etinyere siri ike oyi akwa eme n'okpuru ederede, n'ihi na ụfọdụ ngwa ahụ nwere ike ịbụ ihe ị chọrọ, ebe a, anyị chọrọ ka na-aga aga-aga ederede nke mmetụta anyị na-achọ, na otú anyị ịgbanwee na n'ígwé gburugburu. Nke a dị mfe dị ka adọkpụpụta ederede oyi akwa idak siri ike oyi akwa na usoro iheomume panel.
-Atụle mgbe nile ihe ga-aga n'elu ihe gị chọrọ oru ngo, ma ọ na-ndụ a logo, na-eji a nkpuchi ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ Usoro ke Mgbe mmetụta visualizing ihe iji ihe na-aga na ya, bụ otu n'ime nkà ị na-azụlite n'ụzọ.
5. ịtọlite ​​Animation
Dị ka ọtụtụ ihe Mgbe mmetụta, keyframes bụ ntọala nke a na-aga aga, anyị na-ịchịkwa na-aga aga nke urughuru mmetụta site mụrụ ya ọnụego ọnọdụ, hụrụ site ịgbasa ntọala na usoro iheomume panel maka siri ike oyi akwa ka anyị pụrụ ịhụ n'ebe a,
Na ịpị elekere nkwụsị icon emepụta a keyframe, na anyị na-aga ike 4 ebe a, a ka ihe atụ a di na nwunye nke sekọnd iche ma n'ihi na mgbe nile were usoro iheomume eleghị anya chọrọ ịbụ bit mkpumkpu, ọ dịghị onye chọrọ anya na a logo maka 12 sekọnd ịhụ ihe ọ na-eme mgbe niile, mmetụta kwesịrị ozugbo.
Ka m ike ọ bụla keyframe m kpatụ Birth Rate ubi, na-amalite ala na 1, mgbe ahụ, na-aga ruo 70 na nke abụọ keyframe, na 120 na nke atọ, wee a 5 abụọ ọsọ ikpeazụ keyframe nke atọrọ na 0, na echiche ndị na ahụ nke nta nke nta na-ebelata-ekpughe logo ederede n'okpuru ya.
A nnọọ mfe ntọlite, e nweghị obi abụọ, ma ọ na-arụ ọrụ na dị ka ị pụrụ ịhụ dị mfe-arụzu.
6.-arụ ọrụ na Vector Graphics
Ebe a mara mma ma dị mfe mmetụta ọ bụ isi, ma ọ bụrụ na ị nwere ohere .ai logo faịlụ ma ọ bụ ndị ọzọ vector ndịna-emeputa i nwere ike ịgbalị onye a dị ka mma. Ndị a faịlụ na-kere ke adobe Illustrator, na-ebu oyi akwa ọmụma na-ekwe ka mgbe mmetụta iji na-aghọgbu dị iche iche components n'otu n'otu. Ịmụta iji .ai faịlụ n'ụzọ dị irè bụ nzọụkwụ dị mkpa chọpụtara ahụ, ohere nke Mgbe mmetụta.
Akpa oyi mbubata gị vector graphic n'ime Mgbe mmetụta, nke a bụ dị mfe dị ka adọkpụpụta faịlụ jidesie ngo panel nke na-eweta otu ibubata kwuo. Ọ dị mkpa iji họrọ 'mejupụtara ejigide n'ígwé' nhọrọ, nke utịp ke ọhụrụ mejupụtara na ndị dị iche iche n'ígwé nke ihe oyiyi niile egosipụta maka gị.
Ị nwere ike tinye ije, mmetụta na na ndị a ka i nwere ike ihe ọ bụla ọzọ na Mgbe mmetụta, na nke ugbu a, m ga-nnọọ tinye a adiana na-egosi na.
Dị ka anyị hụrụ tupu, na-aga aga kwụnyeere keyframes, na ebe a ọ dị iche iche.
Nanị ihe m pịa elekere nkwụsị ọzọ na adiana nhọrọ ma smartphone oyi akwa na onyinyo oyi akwa, megharia timeframe on, kpatụ adiana nke ọ bụla ihe na otu ụkpụrụ, ịkwaga na ma na-ekpeghachi dị ka anyị hụrụ tupu.
M na-eji 4 keyframes na ọgwụgwụ ike a mma-adịgide adịgide mmetụta. I nwere ike N'ezie ikpokọta a na aga aga aga na-enwe a spinning logo egosi si urughuru ịgba, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke mmetụta na-dị na usoro. Apụghị m imesi ezu otú dị mkpa dị nnọọ a bit nke experimentation nwere ike ịbụ chọpụtara ụzọ ọhụrụ na-eji ngwá ọrụ e nyere anyị.
M anya na a nyere gị ụfọdụ echiche maka mfe animations i nwere ike tinye ka logos, utu aha na na gị ọrụ, e nwere N'ezie nnọọ ihe ikpọ ihe i nwere ike ime nyere oge, ma anyị niile na-amalite ebe.
TiVo vs DVR, Kedu onye dị mma?
Olee otú dezie Facebook Lee Back Video
Olee otú Download Music si iHeartRadio
Olee otú Download Music Videos si YouTube maka Free
Olee otú Download Facebook Music ka MP3
> Resource> Video> Olee otú Mee ihe Animated Logo na Mgbe mmetụta